June 29, 2021 - Khitalin Media
သင့်ရဲ့ငွေကြေးကံကောင်းမကောင်းဟာသင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဆိုရင်ယုံနိုင်မလားတချို့ကိစ္စတွေကယုံဖို့ခက်ပေမယ့်တကယ်တမ်းမှာ အကျိူးသက်ရောက်မှုရှိနေတတ်တာကိုတော့ငြင်းလို့မရပါဘူးဒီတော့ငွေကြေးကံကောင်းဖို့သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ မလုပ်သင့်တဲ့အချက်နဲ့လုပ်သင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်(၁)ဘောက်ချာအတိုအစတွေပိုက်ဆံအိတ်ထဲမထည့်ထားပါနဲ့ဈေးဝယ်ပြီးနောက်ရလာတဲ့ဘောက်ချာတွေဖြတ်ပိုင်းအတိုအစတွေ၊ စာရွက်ခေါက်တွေကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်သိမ်းထားတာမျိုးက လာဘ်တိတ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်မထားမိဖို့ သတိပြုပါသေချာရှင်းလင်းပါ(၂)ပိုက်ဆံတွေကိုစနစ်တကျစီထည့်ပါ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲပိုက်ဆံတွေထည့်တဲ့အခါလုံးထွေးပြီးထည့်ထားတာမျိုးတွန့်ကြေနေတာမျိုးတွေမဖြစ်စေပါနဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုပြန့်နေအောင်ထားပြီးအစဉ်တကျထည့်ပါကိုယ်သုံးတဲ့ ပိုက်ဆံကိုလည်းလေးစားမှုရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါမှကိုယ့်လက်ထဲမှာ ငွေမြဲပါလိမ့်မယ်(၃) ပိုက်ဆံအိတ်ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပစ်ထားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပစ်ချထား တာမျိုးတွေ့တဲ့နေရာမှာတင်ထားတာမျိုးတွေမလုပ်သင့်ပါဘူးပိုက်ဆံအိတ်ထားဖို့နေရာလေးတစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိသင့်ပြီးစနစ်တကျထားသင့်ပါတယ်(၄)ပိုက်ဆံအိတ် အတွက်ရွေးသင့်တဲ့အရောင်များပိုက်ဆံအိတ်ရဲ့အရောင်ကလည်းလာဘ်ပွင့်ခြင်းလာဘ်တိတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်ပိုက်ဆံအိတ် အနက်ရောင်၊အညိုရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်တို့ကလာဘ်ပွင့်စေပြီးအပြာရောင်ကိုရှောင်သင့်ပါတယ် Zawgyi သင့္ရဲ႕ေငြေၾကးကံေကာင္းမေကာင္းဟာသင့္ပိုက္ဆံအိတ္ကိုဘယ္လိုအသုံးျပဳလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာမူတည္ေနတယ္ဆိုရင္ယုံႏိုင္မလားတခ်ိဳ႕ကိစၥေတြကယုံဖို႔ခက္ေပမယ့္တကယ္တမ္းမွာ အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈရွိေနတတ္တာကိုေတာ့ျငင္းလို႔မရပါဘူးဒီေတာ့ေငြေၾကးကံေကာင္းဖို႔သင့္ပိုက္ဆံအိတ္ကိုအသုံးျပဳတဲ့အခါ မလုပ္သင့္တဲ့အခ်က္နဲ႔လုပ္သင့္တဲ့အခ်က္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္(၁)ေဘာက္ခ်ာအတိုအစေတြပိုက္ဆံအိတ္ထဲမထည့္ထားပါနဲ႔ေဈးဝယ္ၿပီးေနာက္ရလာတဲ့ေဘာက္ခ်ာေတြျဖတ္ပိုင္းအတိုအစေတြ၊ စာ႐ြက္ေခါက္ေတြကို ပိုက္ဆံအိတ္ထဲထည့္သိမ္းထားတာမ်ိဳးက လာဘ္တိတ္ေစပါတယ္။ဒါေၾကာင့္အဲ့ဒါေတြကို ပိုက္ဆံအိတ္ထဲထည့္မထားမိဖို႔ သတိျပဳပါေသခ်ာရွင္းလင္းပါ(၂)ပိုက္ဆံေတြကိုစနစ္တက်စီထည့္ပါ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲပိုက္ဆံေတြထည့္တဲ့အခါလုံးေထြးၿပီးထည့္ထားတာမ်ိဳးတြန႔္ေၾကေနတာမ်ိဳးေတြမျဖစ္ေစပါနဲ႔ပိုက္ဆံေတြကိုျပန႔္ေနေအာင္ထားၿပီးအစဥ္တက်ထည့္ပါကိုယ္သုံးတဲ့ ပိုက္ဆံကိုလည္းေလးစားမႈရွိဖို႔လိုပါတယ္ဒါမွကိုယ့္လက္ထဲမွာ ေငြၿမဲပါလိမ့္မယ္(၃) ပိုက္ဆံအိတ္ကိုၾကမ္းျပင္ေပၚမွာပစ္ထားတာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔ပိုက္ဆံအိတ္ကိုၾကမ္းျပင္ေပၚမွာပစ္ခ်ထား တာမ်ိဳးေတြ႕တဲ့ေနရာမွာတင္ထားတာမ်ိဳးေတြမလုပ္သင့္ပါဘူးပိုက္ဆံအိတ္ထားဖို႔ေနရာေလးတစ္ခုသတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိသင့္ၿပီးစနစ္တက်ထားသင့္ပါတယ္(၄)ပိုက္ဆံအိတ္ အတြက္ေ႐ြးသင့္တဲ့အေရာင္မ်ားပိုက္ဆံအိတ္ရဲ႕အေရာင္ကလည္းလာဘ္ပြင့္ျခင္းလာဘ္တိတ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစပါတယ္ပိုက္ဆံအိတ္ အနက္ေရာင္၊အညိဳေရာင္နဲ႔အစိမ္းေရာင္တို႔ကလာဘ္ပြင့္ေစၿပီးအျပာေရာင္ကိုေရွာင္သင့္ပါတယ္
အနာအဆာပါတိုင္း တန္ဖိုးမဲ့တယ္ဆိုရင္( ဖတ္ၾကည့္ပါ အရမ္းေကာင္းတယ္ )
အနာအဆာပါတိုင်း တန်ဖိုးမဲ့တယ်ဆိုရင်( ဖတ်ကြည့်ပါ အရမ်းကောင်းတယ် ) အနာအဆာပါတိုင်း တန်ဖိုးမဲ့တယ်ဆိုရင်ဆန်ထဲ ကြွက်ချေးပါလာရင်ဆန်အကုန်လုံးကိုသွန်ပစ်မယ့်အစား ကြွက်ချေးကို ဖယ်စားသင့်တယ်အနာပါတဲ့ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးကဆာလောင်ငတ်မွတ်နေသူအဖို့ကတော့အနာဖယ်ပီးစားတတ်ရင် အာဟာရဖြစ်မယ်။ ထို့အတူပါပဲ လူ့လောကမှာလူလူချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာအားနည်းချက်ရှိသူအချင်းချင်း အပြစ်အနာအဆာတွေကိုအပြန်အလှန်ဖေးမတည့်မတ်ရင်းအနာအဆာကိုဖယ်ပီးပေါင်းသင်းတတ်သွားရင်အမြင်ကျယ်ပီး ရင့်ကျက်တဲ့ လူတွေဖြစ်လာမှာပါ။ အမြင်မတူပေမယ့် နှလုံးသားတူရင်သွေးမတော်သားမစပ်သူစိမ်းတွေတောင်လင်နှင့်မယားဆိုတာဖြစ်လာကြသေးတာပါပဲ။ လောကမှာ တူညီတဲ့အရာတွေပဲတစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းလို့ရနေတာ မဟုတ်ပါဘူးဆန့်ကျင်ဘက် မတူညီတဲ့ အရာတွေကိုခွဲမရအောင်ပေါင်းစည်းထားတာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ အမြင်မတူတိုင်း ၊ ခံစားချက်မတူတိုင်း ၊လိင်မတူတိုင်း ၊ခံယူချက်မတူတိုင်းရန်သူဖြစ်မသွားပါဘူးအဓိက လိုအပ်နေတာကအတ္တနည်းပီး ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိရင်ကမ္ဘာကြီးက ရွာကြီးပါပဲ။ Credit Zawgyi အနာအဆာပါတိုင္း တန္ဖိုးမဲ့တယ္ဆိုရင္( ဖတ္ၾကည့္ပါ အရမ္းေကာင္းတယ္ ) အနာအဆာပါတိုင္း တန္ဖိုးမဲ့တယ္ဆိုရင္ဆန္ထဲ ႂကြက္ေခ်းပါလာရင္ဆန္အကုန္လုံးကိုသြန္ပစ္မယ့္အစား ႂကြက္ေခ်းကို ဖယ္စားသင့္တယ္အနာပါတဲ့ငွက္ေပ်ာသီးတစ္လုံးကဆာေလာင္ငတ္မြတ္ေနသူအဖို႔ကေတာ့အနာဖယ္ပီးစားတတ္ရင္ အာဟာရျဖစ္မယ္။ ထို႔အတူပါပဲ လူ႔ေလာကမွာလူလူခ်င္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာအားနည္းခ်က္ရွိသူအခ်င္းခ်င္း အျပစ္အနာအဆာေတြကိုအျပန္အလွန္ေဖးမတည့္မတ္ရင္းအနာအဆာကိုဖယ္ပီးေပါင္းသင္းတတ္သြားရင္အျမင္က်ယ္ပီး ရင့္က်က္တဲ့ လူေတြျဖစ္လာမွာပါ။ အျမင္မတူေပမယ့္ ႏွလုံးသားတူရင္ေသြးမေတာ္သားမစပ္သူစိမ္းေတြေတာင္လင္ႏွင့္မယားဆိုတာျဖစ္လာၾကေသးတာပါပဲ။ ေလာကမွာ တူညီတဲ့အရာေတြပဲတစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ေပါင္းစည္းလို႔ရေနတာ မဟုတ္ပါဘူးဆန႔္က်င္ဘက္ မတူညီတဲ့ … Read more
ဆံပင် ကို တောက်ပြောင် ပျော့အိ စေမယ့် နည်းလမ်း ၂ မျိုး
ကြမ်းပြီးမွဲခြောက်တဲ့ ဆံပင် ကို လူတော်တော်များများမှာ တွေ့နေရပါတယ် ။ဒီလို မွဲခြောက် တဲ့ ဆံပင် ပုံစံက ခေါင်းဖြီးထားလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်မရှိဘူးလို့ ခံစားရစေပါတယ် ။ အမျိုးသမီး တိုင်းကတော့ နူးညံ့ပြီး တောက်ပြောင်တဲ့ ဆံပင် မျိုးကို လိုချင်ကြပါတယ် ။ ဆိုင်မှာ ဖယောင်းသွင်း ခြင်းကလည်း ဓါတုဆေး တွေသုံးရတဲ့အတွက် ခဏတာသာ လှစေပြီး ဆေးကြောင့် ဆံပင် တွေ ပျက်စီးနိုင်ပါတယ် ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့ အိမ်တွင်း နည်းလမ်း တွေကသာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်ဥ သုံးနည်း ကြက်ဥ တစ်လုံးရဲ့ အကာကိုသက်သက်ဖယ်ယူပါ ။ ပြီးနောက် သံလွင်ဆီ နှင့် ပျားရည် ကို လက်ဖက်ရည် ၁ဇွန်းစီ ထည့်ပြီး ပြေပျစ်သည်အထိ … Read more
သင့္အေၾကာင္းကို တစ္စုံတစ္ဦးကေတြးေနၿပီဆိုရင္ ခံစားရမယ့္နိမိတ္မ်ာ……
သင့်အကြောင်းကို တစ်စုံတစ်ဦးကတွေးနေပြီဆိုရင် ခံစားရမယ့်နိမိတ်များ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အကြောင်းတွေးနေတာကို သိနိုင်မယ်ထင်လား? သိရောသိချင်လား? ခုပြောပြမယ့် အချက်တွေကသင့်အကြောင်းကို တစ်ယောက်ယောက်ကေတွးနေတဲ့အခါ သင့်မှာ ခံစားနေရမယ့် လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အကြောင်းတွေးတယ်ဆိုတာမှာ သင့်ကိုချစ်လို့ဖြစ်စေ မုန်းလို့ဖြစ်စေတွေးနေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင့်ကို ရန်ပြုဖို့ထိတွေးနေတယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကိုသိထားတော့သင်သတိထားနိုင်တာပေါ့.ကဲ..ဘယ်လိုတွေခံစားရမလဲ ဘာတွေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်.. နှာချေခြင်း ဒီယုံကြည်မှုကတော့ အာရှနိုင်ငံတွေမှာအမြစ်တွယ်နေတဲ့ ယုံကြည်မှုလေးပါနော်..တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်အကြောင်းတွေးနေတဲ့အခါ သင့်နှာခေါင်းဟာယားယံစပြုလာပြီးမကြာခင်ထပ်ခါထပ်ခါနှာချေမှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဲ့။ ဒါကနေမကောင်းတဲ့ အချိန်အတွက်တော့အကျုံးမဝင်ပါဘူးနော်။ အအေးပတ်တာလည်း မရှိ နှာခေါင်းယားယံလောက်အောင် ရှုရှိုက်စရာလည်းမရှိပဲ အသားလွတ်ကြီးနှာတွေထချနေရင်တော့တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ အတွေးဗဟိုမှာသင်ရောက်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့ဘာကိုတွေးနေလဲဆိုတာ ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်၂ ခါနှာချေတာဟာ တစ်စုံတစ်ဦးက သင့်မကောင်းကြောင်းပြောနေပြီ ဆိုတာပါပဲ။ ၃ ခါနဲ့အထက်နှာချေတာကတော့ သင့်ကောင်းကြောင်းတွေကိုတွေးနေတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိလွမ်းနေပြီး သင့်ကိုချစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလူကဘယ်သူလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုလည်းပြောပြဦးမယ်နော်.. ရိုးရာအစဉ်အလာနည်းလေးအရဆို သင့်ဘေးကလူတစ်ယောက်ယောက်ကို သူကြိုက်တဲ့ဏန်း၃လုံးပါတဲ့နံပါတ်တစ်ခုကိုပေးဖို့ပြောပါ။ ဒါကို အခြေခံထားပြီးတွက်ချက်ရင် သင့်အကြောင်းကိုတွေးနေတဲ့သူကို ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်တဲ့..ဘယ်လို တွက်ချက်မလဲဆိုတော့သင့်ကို … Read more
မေဝးေတာ့တဲ့အနာဂတ္မွာ သင့္ကံၾကမၼာအေျခအေန ဘယ္လိုရွိေနလဲ?
မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ သင့်ကံကြမ္မာအခြေအနေ ဘယ်လိုရှိနေလဲ? နံပါတ် ၁ နံပါတ် ၁ ကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ သင့်ကို ဘယ်လိုအတားအဆီး အနှောင့်အယှက်တွေပဲ ပိတ်ပင်နေပါစေ သင့်ထံ ကံကောင်းခြင်းတွေ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာမှာပါ။ တကယ်လို့ သင့်ဘဝမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ ကြုံတွေ့လာရင်တောင် ဒီအပြောင်းအလဲတွေကတစ်ဆင့် သင့်အနေနဲ့ ကောင်းသောရလဒ်တွေပဲ ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။ ဆိုလိုတာက အရာအားလုံးက သင်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်း ဖြစ်နေမှာပါ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ အကောင်းမြင်တတ်ဖို့နဲ့ သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်ဖို့ပါပဲ။ ဒါမှ အားလုံးအဆင်ပေမှာပါ။ နံပါတ် ၂ နံပါတ် ၂ ကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်အလုပ်ကိုမဆို တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ အပေါ်ယံကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေနဲ့ မလုပ်ဆောင်ပဲ သင့်အရည်အချင်းတွေထုတ်သုံးပြီး စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ဆောင်ပါ။ မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာ … Read more
သဘာဝအတိုင္း မ်က္ခုံးေမႊးနက္နက္ထူထူေလးျဖစ္ေအာင္လုပ္လို႔ရမယ့္အိမ္တြင္းနည္းလမ္းမ်ား… မ်က္ႏွာတစ္ခုမွာ မ်က္ခုံးေမႊး ရဲ႕ အလွကလည္း အေရးပါလွပါတယ္။ အလွမျပင္ထားရင္ေတာင္ မ်က္ခုံးေမႊးေလး ထူထူနက္နက္ေလး ျဖစ္ေနရင္ သဘာဝ အတိုင္း ခ်စ္စရာ ေကာင္းေနတာပါ။ မ်က္ခုံးေမႊး ပါးတဲ့ သူေတြကေတာ့ ဒီခံစားခ်က္ကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မ်က္ခုံးေမႊး ပါးတဲ့ သူေတြအတြက္ ထူၿပီး နက္နက္ကေလးျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႔ရတဲ့ အိမ္တြင္း နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြကို မွ်ေဝ ေပးခ်င္ပါတယ္ ။ တကယ္လွခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဇြဲရွိရွိနဲ႔ ပုံမွန္လုပ္မွ ရပါမယ္။ ၁။ “သံလြင္ဆီ” ဗီတာမင္အီး ႂကြယ္ဝတဲ့ သံလြင္ဆီ ဟာ သင့္ မ်က္ခုံးေမႊးကို အေရာင္နက္နက္ေလးနဲ႔ အရွည္ျမန္ၿပီး ထူထူေလး ျဖစ္ေနေစမွာပါ ။ သံလြင္ဆီကို အနည္းငယ္ အပူေပးၿပီး ညအိပ္ရာဝင္ခါနီးတိုင္း … Read more
ဗီဇပြောင်း စူပါကိုဗစ်ပိုးကို ဗြိတိန်တွင်သာမက အခြားနိုင်ငံများတွင်လည်း တွေ့ရှိ (တတိယလှိုင်း ဖြစ်လာတော့မှာလား)အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီပိုးအကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလဲ ညနေကပြည်သူကို သတိပေးစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ သိသင့်တဲ့အချက်အလက်လေးတွေကို တင်ပြပေးပါမယ်။ဒီပိုးဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ မြို့တော်လန်ဒန်မှာ ပျံ့နှံ့နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယအပတ်မှာ တွေ့ရှိရတဲ့ ပိုးတွေ့လူနာတွေရဲ့ ၆၂% ဟာ ဒီဗီဇပြောင်းပိုးကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြောဖို့စောသေးပေမယ့် ဒီပိုးဟာ အရင်ပိုးထက် အဆ ၇၀ ပိုမို ကူးစက်နိုင်တယ်လို့ ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါကို ပိုမိုဆိုးရွားစွာ ခံစားရတာမျိုးတော့ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလန်မှာ ဝန်ကြီးချုပ်က အရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ဆိုပီး လန်ဒန်မြို့ကို Tier4အဆင့် အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်လိုက်ပီး … Read more
သွေးအမျိုးအစားက ပြောပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထား…..
“လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ” ဆိုတဲ့ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်း ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ရှိတဲ့လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်နေသဘောထားတွေ တူနိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် တူညီတဲ့အချက်တစ်ချို့ကို ဘုံထုတ်ပြီး သွေးအမျိုးအစားအလိုက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားတဲ့ စစ်တမ်းတစ်ရပ်ကို စာဖတ်ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ “A” သွေး ပိုင်ရှင်များ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူဦးရေ လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်က “A”သွေးပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသွေး အမျိုးအစားပိုင်ရှင်တွေဟာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင် တွေးခေါ်ပေးတတ်ပြီး နားလည်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသင်းအဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာမှာလည်း အေးအေးဆေးဆေး တည်ငြိမ်လေ့ရှိသူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ဘဝကို ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်တည်ဆောက်လေ့ရှိပြီး စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဦးစားပေးတတ်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ရင်ထဲက စိတ်ခံစားမှုတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိပေမယ့် ဘာအရာမှာမဆို ပြီးပြည့်စုံလုနီးပါးဖြစ်မှ ကြိုက်တတ်တဲ့ အကျင့် ကြောင့် … Read more
၁။ ေရေအးနဲ႔ ထမင္း ထမင္းစားရင္း ေရေသာက္ေလ့ရွိသူေတြကို ျမင္ဖူးၾကမွာပါ။ တခ်ိဳ႕က အစာစားရင္း ေရေသာက္ရင္ အစာပိုေၾကလြယ္မယ္လို႔ထင္ၾကတယ္။ ဒါက တကယ္ေတာ့မမွန္ပါဘူး။ ထမင္းစားရင္း ေရေသာက္မိရင္ မိမိစားထားတဲ့ အစာက ေရနဲ႔ ေရာေထြးသြားၿပီး အူလမ္းေၾကာင္းမွာ အစိုင္အခဲအျဖစ္ က်န္ရွိေနမွာပါ။ ဒါက အစာေခ်ဖ်က္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကို မအီမသာျဖစ္ေစပါတယ္။ ၂။ သခြားသီးနဲ႔ ခရမ္းခ်ဥ္သီး သခြားသီးမွာ ပါတဲ့ enzyme(အန္ဇိုင္း) တစ္မ်ိဳးဟာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမွာပါတဲ့ ဗီတာမင္ စီ(အခ်ဥ္ဓာတ္) နဲ႔ လုံးဝမတည့္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ခုကို တြဲစားမိရင္ ကိုယ္လက္မအီမသာျဖစ္ၿပီး မူးေဝးေအာ့အန္တာေတြ ျဖစ္ပြားေစပါလိမ့္မယ္။ ၃။ ဘီယာနဲ႔ ေျမပဲဆားေလွာ္ ဘီယာကို အငန္ဓာတ္ပါတဲ့ ေျမပဲဆားေလွာ္နဲ႔ တြဲဖက္ၿပီးမစားသုံးသင့္ပါဘူး။ ဘီယာနဲ႔ ေျမပဲဆားေလွာ္ တြဲဖက္စားသုံးတဲ့အခါ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို … Read more